Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ)
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
Multiple myeloma သည် သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များတွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များ (အင်မျူနိုဂလိုဗျူလင်) များသည် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ရန်အတွက် ပဋိပစ္စည်းများကိုထုတ်ပေးသည်။ ပုံမှန်သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များကို ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွင် တွေ့ရပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်တွင်း အရေ့းကြီးသော အပိုင်းများဖြစ်ကြ၏။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဆိုသည်မှာ အရိုးခေါင်းများအတွင်းရှိသော တစ်ရှူးအပျော့များ ဖြစ်၏။ သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များအပြင် ချဉ်ဆီသည်လည်း တခြားသောသွေးဆဲလ် အမျိုးအစားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကင်ဆာဆိုသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းမှ ဆဲလ်များ ထိန်းချုပ်မှုမရှိပဲ ပွားလာသည့်အခါတွင် စဖြစ်လာခြင်းဖြစ်၏။ ခန္ဓါကိုယ်ရှိ ဆဲလ်တိုင်းနီးပါး ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပြီး တခြားသော အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့လည်း ပျံ့နှံ့နိုင်ပါသည်။
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Multiple myeloma သည် ဒုတိယအဖြစ်များဆုံး သွေးကင်းဆာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုသ၍မရနိုင်ဟုယူဆခဲ့ကြသော်လည်း မကြာသေးမှီက ကင်ဆာသုတေသနများအရ ကုသရနိုင်ကြောင်း သိလာရပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Multiple myeloma ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ကျောက်ကပ်အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း
Multiple myeloma သည် ကိုယ်ခံအားကိုထိခိုက်သောကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင် လက္ခဏာအများအပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အဓိကလက္ခဏာလေးခု ရှိသည်။
Multiple myeloma တွင် သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များကို အလျင်အမြန်ထုတ်လုပ်၏။ ထိုကင်ဆာဆဲလ်များသည် ချဉ်ဆီအတွင်းရှိ ပုံမှန်သွေးဆဲလ်များနှင့် ယှဉ်လျှင် များလာရာမှ သွေးဆဲလ်ပမာဏ နည်းလာခြင်း ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုအခြေအနေမှ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာနှစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ သွေးဆဲလ်များ နည်းပါးသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ သွေးအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြူဖျော့ခြင်းနှင့် မောပန်းလွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ သွေးထဲ၌ သွေးမွှားဥများ နည်းပါးလာခြင်းဖြစ်သည်။ သွေးမွှားဥများသည် ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း၌ အနာကျက်စေသည့်ဆဲလ်များဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအနာမျိုးမဆို အနာကျက်မြန်အောင် ကူညီပေး၏။ သွေးမွှားနည်းလျှင် သွေးထွက်လွယ်ခြင်း အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း ဖြစ်လာပါမည်။ နောက်ထက် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်မျိုးမှာ သွေးဖြူဥနည်းခြင်း – ပုံမှန်သွေးဖြူဥများ နည်းပါးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်သည် ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကို ခုခံနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အရိုးနှင့် ကယ်လ်စီယမ် ပြဿနာများ
Myeloma ဆဲလ်များသည် အရိုးဆဲလ်စနစ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ Myeloma ဆဲလ်များသည် အရိုးဆဲလ်(Osteoclasts)များအား ပျော်ဝင်ပျက်စီးနှုန်းကိုမြင့်စေပြီး ဆဲလ်အသစ် (osteoblasts) များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးသည့် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုတ်နိုင်၏။ ထိုအခါတွင် အရိုးများအားနည်းလာကာ အလွယ်တကူ ကျိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Multiple myeloma ရောဂါရှင်များတွင် အရိုးကျိုးခြင်းသည် အဓိကပြဿနာပင်ဖြစ်သည်။ အရိုးဆဲလ်အသစ် ဖြစ်စေမည့် လှုံ့စော်မှုမရှိတော့သည့်အခါ ကိုယ်တွင်းမှ ကယ်လ်စီယမ်လယ်ဗယ်တိုးလားပြီး အမြင့်ဆုံးထိတိုးလာနိုင်ပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်မှ သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ကူးစက်ပိုးများအား တိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကင်ဆာဖြစ်နေသော သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များသည် ခန္ဓါကိုယ်အား ပိုးကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ပိုးများ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လာစေနိုင်ပါသည်။
Myeloma ဆဲလ်များမှထုတ်သော ပဋိပစ္စည်းများသည် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေပြီး ကျောက်ကပ်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Multiple myeloma သည် သွေးကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများရှိ သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များ အထိန်းမဲ့စွာ ကြီးထွားလာပြီး ကင်ဆာဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးထွားလွန်သော ဆဲလ်များသည် ချဉ်ဆီအတွင်း၌ အကျိတ်များကို ဖြစ်စေ၏။ ခန္ဓါကိုယ်မှ တခြားနေရာများကိုလည်း မကျန်းမမာဖြစ်စေ၏။ အကျိတ်တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်နေပါက ထိုရောဂါကို isolated (solitary) plasmacytoma ဟုခေါ်သည်။ တစ်ခုထက်ပိုသော plasmacytoma ဆိုပါက Multiple myeloma ဟု ခေါ်ပါသည်။
Multiple myeloma ကိုဖြစ်စေရသည့်အကြောင်းရင်းများကို သိပ္ပံပညာရှင်များ တိတိကျကျ မသိရသေးပါ။ DNA အတွင်းပြောင်းလဲမှုမှ ကင်ဆာသွေးရည်ကြည်ဆဲလ်များ ဖြစ်လာသည်ဟု သံသယရှိထား၏။
ငါ့ဆီမှာ Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Multiple myeloma ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ် – Multiple myeloma ဖြစ်နိုင်ချေသည် အသက်ကြီးလေလေ မြင့်လေလေဖြစ်သည်။ လူအများစု၌ Multiple myeloma ကို အသက် ၆၅ နှစ်တွင် သိကြရ၏။
လိင် – အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် Multiple myeloma ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းငယ်မြင့်သည်။
လူမျိုး – Multiple myeloma သည် လူဖြူအမေရိကန်များထက် အာဖရိကန်အမေရိကန်များတွင် ၂ ဆ ပိုများ၏။
ဓါတ်ရောင်ခြည် – ပြင်းအားများသော (အဏုမြူဗုံး) ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့် ထိတွေမိသူများ သို့မဟုတ် ပြင်းအားနည်း ဓါတ်ရောင်ခြည်အား (ဓါတ်မှန်) အချိန်အတော်ကြာ ထိတွေ့ရသူများ
မိသားစုရာဇဝင် – Multiple myeloma သည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည်။
အဝလွန်ခြင်း – အမေရိကန် ကင်ဆာလေ့လာရေးအဖွဲ့၏ လေ့လာချက်အရ အဝလွန်ခြင်းသည် Multiple myeloma ဖြစ်နိုင်ချေကိုများစေကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
တခြားသော ကင်ဆာများ သို့မဟုတ် သွေးရည်ကြည်ဆဲလ်ရောဂါများရှိနေခြင်း
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Multiple myeloma ကို ပုံမှန်သွေးစစ်နည်းများမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်၏။ သင့်၌ ထိုရောဂါရှိနေလျှင် သွေးတွင်းမှ ပရိုတင်းများ ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ သွေး၏ ပျစ်ချွဲမှုများနေခြင်းကိုလည်း သတိထားမိနိုင်သည်။ ပုံမှမဟုတ်သည့် သွေးနီဥဆဲလ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ သွေးပျစ်နှုန်းကို ပိုများစေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာဝန်မှ Multiple myeloma ၏ ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်း လက္ခဏာများကို စမ်းသပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ Multiple myeloma ကို သံသယရှိပါက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် နမူနာယူပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ တခြားသောစစ်ဆေးမှုများ – blood monoclonal immunoglobulin နှင့် radiology tests များပြုလုပ်ပြီး အရိုးကိုထိသည့်ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
Multiple Myeloma (သွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Multiple myeloma ကုသမှု၏ပထမအဆင့်မှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမျှတအောင် ထောက်ပံ့ပေးမည့် ဆေးများဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဆေးများကိုပေါင်းပေးခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးများ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးများ၊ ပင်မဆဲလ်အစားထိုး ကုသခြင်းများနှင့် တချို့လူနာများတွင် ခွဲစိတ်ခြင်းများ စသည်တို့ကို အခြေအနေအဆိုးအကောင်းပေါ် မူတည်ပြီး အကြံပြုမည်ဖြစ်သည်။
Multiple myeloma အားကုသည့် ဆေးများစွာရှိသည်။ အောက်ပါဆေးများအား များသောအားဖြင့် Dexamethasone နှင့် တွဲသုံးပြီး တစ်ခါတစ်ရံ သောက်ဆေး သို့မဟုတ် ထိုးဆေးများအား လူနာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပေးပါသည်။
Dexamethasone (Decadron) – ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များအား ပြုပြင်ပေးခြင်း;
Bortezomib (Velcade) – protease inhibitor;
Lenalidomide (Revlimid) – ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များအား ပြုပြင်ပေးခြင်း;
Pamidronic acid (Aredia) – အရိုးပါးခြင်းအား တားဆီးပေးခြင်း
Zoledronic acid (Zometa) – အရိုးပါးခြင်းအား တားဆီးပေးခြင်း
Melphalan (Alkeran) – Myeloma ဆဲလ်များကို အဆိပ်ဖြစ်စေသည့် alkylating agent
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Multiple myeloma ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Multiple myeloma ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိထားပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများသာမက ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်ပါ မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကို သိထားပါ။
သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တို့နှင့် အထောက်အပံ့ပေးသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါ။
အနားကောင်းကောင်းယူပါ။ ကောင်းကောင်းစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။ အစာစားရခက်နေလျှင် အစားများကို နည်းနည်းစီနှင့် အကြိမ်ရေများများစားပါ။
ကုသမှုခံယူနေစဉ် အလုပ်၊ ကျောင်းသွားရမည်ဆိုပါက အလုပ်ရှင်၊ ကျောင်းနှင့် ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသည့် ရည်မှန်းချက်ကိုသာ ချထားပေးပါ။
Multiple Myeloma. http://www.medicinenet.com/multiple_myeloma/article.htm. Accessed July 21, 2016.
Multiple Myeloma. http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-what-is-multiple-myeloma. Accessed July 21, 2016.
Multiple Myeloma. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-myeloma/basics/definition/con-20026607. Accessed July 21, 2016.
Multiple Myeloma. http://www.webmd.com/cancer/multiple-myeloma-symptoms-causes-treatment?page=1#1. Accessed July 21, 2016.
Learn the Basics About Multiple Myeloma. https://www.themmrf.org/multiple-myeloma/. Accessed July 21, 2016.
နေလောင်ခံခရမ်နှင့် ဖြူစင်ဝင်းပခြင်းဆိုင်ရာ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အလှအပ
အစားအစာတွေကို ငှက်ပျောရွက်နဲ့ထုပ်ပိုးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း